रातको बेला खान नहुने यी १० खानेकुराहरु - PT Online News
रातको बेला खान नहुने यी १० खानेकुराहरु
३० माघ, २०७७ ०८:५९
हरेक व्यक्तिको खानासँग जोडिएको फरक फरक आदतहरु हुन्छन् । कोही बेलुका चाँडै खाना खान्छन् भने कोही अबेलासम्म खाँदैनन् । शरीरमा हाम्रो खानपानसँग जोडिएको आदतको प्रभाव पर्दछ । तर तपाईले रातको समयमा खाने खानेकुराले शरीरलाई मात्र होइन, निन्द्रालाई समेत असर गर्दछ । केही यस्ता खानेकुराहरु छन्, जसलाई सुत्नुअघि खाँदा निन्द्रा नै लाग्दैन ।
आयुर्वेद विज्ञानका अनुसार पनि सुत्नुभन्दा दुई घन्टा वा त्यो भन्दा अघि नै खाना खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । खाना खानासाथ सुत्नाले मोटोपन बढ्दछ । यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई पनि असर गर्दछ । खाना खानु लगत्तै अगाडि खानेकुरा पचाउनको लागि एकदम सजिलो हुने हल्का खानेकुरा हुनुपर्छ ।
सुत्नुअगाडि अत्यधिक क्यालोरी भएको खानेकुरा खानाले मुटु दुख्ने समस्या पनि हुनसक्छ । यसको साथै केही वस्तुहरु यस्ता हुन्छन्, जसको सेवन सुत्नुअघि गर्दा शरीरलाई अत्यधिक नोक्सानी पुर्याउन सक्छ । यहाँ हामीले सुत्नुअघि खान नहुने केही खानेकुराको बारेमा जानकारी
१. मांसाहार प्रोटिन र लौह पदार्थको राम्रो स्रोत हो । यसर्थ, सुत्नु अगाडि मांसाहार गर्नाले सुत्नासाथ आरामदायक निन्द्रा नपर्न सक्छ ।
२. धेरे फाइबर भएका सागसब्जी वा खाद्य पदार्थ जस्तो कि काउली, प्याज, बन्दागोभी जस्ता खाद्यपदार्थको सेवन राति सुत्नु अगाडि गर्नु हुँदैन । किनकी यसमा तत्काल नपच्ने फाइबर (रेशा)हरु मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसकारण तपाई यस्ता खानेकुरा खाएपछि लामो समयसम्म अघाएकोजस्तो महसुस गर्नुहुन्छ । कहिलेकाँही पेट फुलेको जस्तो महसुस पनि हुनसक्छ ।
३. सुत्नुभन्दा अगाडि कहिले पनि डार्क चक्लेट पनि खानु हुँदैन । यसमा क्याफिन र अन्य कयौं पदार्थ हुन्छन् । यसले मुटुको नियमित कामको क्षमता बढाउँछ । यसबाट गहिरो निन्द्रा पर्दैन र मष्तिष्क पनि शान्त रहन पाउँदैन ।
४. रातिको खानामा तपाई पिजा खानुहुन्छ भने यो बानी स्वास्थ्यका लागि ठिक होइन । किनकी यसलाई पचाउन शरीरलाई धेरै नै पापड पेल्नुपर्छ । दिउँसो पनि पाचन प्रणालीले पिजाको मुकाबिला सजिलोसँग गर्न सक्दैन भने राति के होला ? तपाईं सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । जबकि रातको समय पाचन प्रणालीको आराम गर्ने समय हो । पिजामा चिल्लो पदार्थ अत्यधिक हुन्छ । यसमा एसिड पनि अत्यधिक हुन्छ, जसले मुटु दुख्ने समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।
वन्लीआयुर्वेद डटकमको सहयोगमा
५. पास्ता तत्काल तयार बनाएर खान मिल्ने खानेकुरा हो । यसर्थ, सुत्नुअघि प्रायः मानिसहरुले हतारको बेला पास्ता बनाएर खान्छन् र सुत्छन् । पास्तामा अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट र यस्तै कयौं पदार्थहरु हुन्छन्, जसलाई शरीरले तत्काल पचाउन सक्दैन । सुत्नुअघि पास्ता खानाले कब्जियत र हाइपर एसिडिटीजस्ता समस्याहरु हुनसक्छ ।
६. ज्यादा मसलेदार खाना र पिरो खानेकुरा पनि सुत्नुअगाडि खानु हुँदैन, यसले शरीरमा पित्त बढाउने काम गर्दछ । खुर्सानीलाई अन्य कुरामा मिसाएर खानु स्वास्थ्यका लागि अत्यधिक फाइदाजनक हुन्छ तर अत्यधिक पिरो र मसालेदार खानेकुरा भने स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ, अझ सुत्नु अघि त यसलाई खानु नै हुँदैन ।
७. चीज बर्गरमा अधिकमात्रामा अत्यधिक मात्रामा चिल्लो पदार्थ हुन्छ । यसकारण रातको समयमा चीज बर्गर खानाले राम्रोसँग पच्दैन । यसले पेटसँग जोडिएका कयौं बिरामी हुनसक्छ ।
८. स्न्याक्स, चिप्स आदिको सेवन पनि सुत्नु अघि खानु हुँदैन । यसले शरीरलाई नोक्सानी पुर्याउँछ । किनकी यसमा अत्यधिक मात्रामा मोनोसोडियम ग्लूटामेट हुन्छ । यसर्थ, निन्द्रासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका समस्याहरु आउन सक्छन् ।
९. सुत्नु अघि अबेर राति मिठाई खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । मिठाईले दाँत खराब गर्दछ । यसले मोटोपन बढाउनुका साथै शरीरमा पनि नकरात्मक असर पार्दछ ।
१०. चाउचाउमा अत्यधिक क्यालरी हुन्छ । यसकारण यसलाई सुत्नुअघि खानु हुँदैन । भोक लाग्दासाथ तत्काल तयार बनाउन सकिने चाउचाउमा हुने अत्यधिक कार्बोहाइड्रेड बोसोमा बदलिन्छ । सुत्नुअघि चाउचाउ वा चाउमिन खानाले यसले पेटसँग सम्बन्धित अनेक समस्या निम्त्याउँछ । यसर्थ, सुत्नुअगाडि वोसोयुक्त खानेकुराहरु खानुहुँदैन ।
ओखर खादाको फाइदै फाइदा, म’स्तिष्कमा स्मरण शक्ति देखि यौन शक्ति...
चर्चित नायिका एलिजा गौतमको मनै लोभ्याउने तस्बिरहरु
के हो ‘सुगर रिलेसनशिप’?